Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Genesis 49
Nepali New Revised Version, Genesis 49
1 तब याकूबले आफ्‍ना छोराहरूलाई बोलाएर भने, “तिमीहरू यहाँ जम्‍मा होओ, र पछिल्‍ला दिनहरूमा तिमीहरूमाथि के आइपर्नेछ सो म भनूँला।
2 “हे याकूबका छोरा हो, जम्‍मा भएर सुन, तिमीहरूका बाबु इस्राएलले भनेका सुन।
3 “रूबेन, तँ मेरो जेठो छोरो होस्‌, मेरो शक्ति र मेरो बलको पहिलो फल, गौरव र शक्तिमा सर्वप्रमुख।
4 पानीजस्‍तो चञ्‍चल तँ, तेरो प्रतिष्‍ठा कायम रहनेछैन, किनभने तेरा बाबुको पलङ्गमा तँ चढ़िस्‌, र त्‍यो अशुद्ध पारिस्‌– तँ मेरो ओछ्यानमा चढ़िस्‌!
5 शिमियोन र लेवी दाजुभाइ हुन्‌, तिनका तरवार नै उपद्रवका हतियार हुन्‌,
6 ए मेरो प्राण, तिनीहरूको सभामा नआइज, तिनीहरूको सङ्गतिमा नलाग्‌, किनकि आफ्‍नो रीसमा तिनीहरूले मानिसहरूलाई मारेका छन्‌, तिनीहरूले आफूखुशी गरेर गोरुहरूका ढोड़नसा काटेका छन्‌।
7 तिनीहरूको रीसमाथि श्राप परोस्‌, किनभने त्‍यो भयानक छ, र तिनीहरूका क्रोधमाथि, किनकि त्‍यो निष्‍ठुर छ। तिनीहरूलाई म याकूबमा छिन्‍न-भिन्‍न पार्नेछु, र इस्राएलमा तितरबितर पार्नेछु।
8 “ए यहूदा, तेरा दाजुभाइहरूले तेरो प्रशंसा गर्नेछन्‌, तेरो हातले तेरा शत्रुहरूका गर्दन पक्रनेछ, तेरै बाबुका छोराहरू तेरो सामुन्‍ने निहुरिनेछन्‌।
9 यहूदा सिंहको डमरु हो। ए मेरो छोरो, शिकारबाट तँ आएको छस्‌, त्‍यो निहुरिन्‍छन्‌, र सिंहझैँ लेटिरहन्‍छन्‌, अँ, सिंहनीझैँ– कसले त्‍यसलाई उठाउने आँट गर्छ?
10 यहूदाको हातबाट राजदण्‍ड हट्‌नेछैन, राज्‍य चलाउनेको लाठी त्‍यसका खुट्टाका बीचबाट हट्‌नेछैन, जबसम्‍म त्‍यसका मालिक आउँदैनन्‌। र जातिहरू उहाँको आज्ञाकारी बन्‍नेछन्‌।
11 त्‍यसको गधालाई दाखको बोटमा, र गधाको बछेड़ालाई चाहिँ उत्तम जातको हाँगामा बाँध्‍नेछ। त्‍यसले आफ्‍ना लुगाहरू दाखमद्यमा, आफ्‍ना पोशाक अङ्‌गूरको रसमा धुनेछन्‌।
12 त्‍यसका आँखा दाखमद्यभन्‍दा गाढ़ा, र त्‍यसका दाँत दूधभन्‍दा सेता हुनेछन्‌।
13 “जबूलूनको वास समुद्रको किनारमा हुनेछ, जहाजहरूका निम्‍ति त्‍यो बन्‍दरगाह हुनेछ, र त्‍यसको सिमाना सीदोनसम्‍म हुनेछ।
14 “इस्‍साखार बलियो गधा हो, जो दुई भारीहरूका बीचमा लेटिरहन्‍छ।
15 आफ्‍नो विश्रामको ठाउँ असल रहेछ, र त्‍यसको देश रमाइलो रहेछ भन्‍ने त्‍यसले देखेपछि, त्‍यसले भारी बोक्‍नलाई आफ्‍नो काँध झुकाउनेछ, र बेगारीको काम गर्न मान्‍नेछ।
16 “इस्राएलका कुलमध्‍येको एक भएर दानले आफ्‍ना मानिसहरूका निम्‍ति न्‍याय गर्नेछ।
17 दानचाहिँ बाटोमा भएको एउटा सर्प, र गोरेटोमा भएको विषालु साँप हुनेछ, जसले घोड़ाका कुर्कुच्‍चा डस्‍छ, र त्‍यसको घोड़चढ़ीचाहिँ पछिल्‍तिर लोट्‌छ।
18 “हे प्रभु, म तपाईंको उद्धारको प्रतीक्षा गर्दैआएको छु।
19 “गादमाथि एक दलले आक्रमण त गर्नेछ, तर त्‍यसले तिनीहरूलाई उल्‍टा खेद्‌दै हमला गर्नेछ।
20 “आशेरबाट उत्‍पन्‍न हुने अनाजहरू उत्तम हुनेछन्‌, र त्‍यसले राजकीय खाना बाँड़िदिनेछ।
21 “नप्‍ताली फुकाइएकी मुडुली-मृग हो, जसले सुन्‍दर-सुन्‍दर बच्‍चा बियाउँछे।
22 “योसेफ फलले लटरम्‍म भएको एउटा लहरा हो, पानीको मूलनेर भएको फल दिने लहरा, जसका हाँगाहरू पर्खाल माथि-माथि फैलिन्‍छन्‌।
23 धनुर्धारीहरूले त्‍यसलाई ज्‍यादै दु:ख दिए, त्‍यसमाथि काँड़ चलाए, र त्‍यसको खेदो गरे।
24 तैपनि त्‍यसको धनु दह्रो नै रह्यो, र त्‍यसका पाखुराहरू फूर्तिलै रहे, याकूबका परमशक्तिशालीको हातद्वारा, ती गोठाला, इस्राएलको चट्टानद्वारा,
25 अर्थात्‌ तेरा बाबुका परमेश्‍वर, जसले तँलाई सहायता गर्नुहुन्‍छ, सर्वशक्तिमान्‌, जसले तँलाई आशिष्‌ दिनुहुन्‍छ– माथि स्‍वर्गका आशिष्‌हरू, तल अगाधका आशिष्‌हरू, स्‍तन र गर्भका आशिष्‌हरू।
26 तेरा बाबुका आशीर्वाद प्राचीन पहाड़हरूका आशीर्वादभन्‍दा र अनन्‍त डाँड़ाहरूका आशिष्‌भन्‍दा प्रबल छ। ती सबै योसेफको शिरमा होऊन्‌, त्‍यसका दाजुभाइहरूमध्‍येका प्रधानको शिरैमा।
27 “बेन्‍यामीन त एउटा फहराउने ब्‍वाँसो हो, बिहानचाहिँ ल्‍याएको शिकार त्‍यसले खान्‍छ, र बेलुकीचाहिँ त्‍यसले लूट बाँड्‌छ।”
28 यी सबै इस्राएलका बाह्र कुल हुन्‌। आफ्‍ना बाबुले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिँदै भनेको कुरा यही हो। प्रत्‍येकलाई तिनले सुहाउँदो आशीर्वाद दिए।
29 तब तिनले तिनीहरूलाई यो आज्ञा दिए: “म त मेरा मानिसहरूकहाँ मिल्‍न जान लागेको छु। हित्ती एप्रोनको खेतमा भएको ओड़ारमा मेरा पिता-पुर्खाहरूका साथमा मलाई गाड़,
30 अर्थात्‌ कनान देशमा मम्रेनेरको मक्‍पेलाको खेतमा भएको ओड़ार, जो अब्राहामले हित्ती एप्रोनको हातबाट खेतसमेत चिहान बनाउनलाई किनेका थिए।
31 त्‍यहीँ नै उनीहरूले अब्राहाम र तिनकी पत्‍नी सारालाई गाड़ेका थिए। र त्‍यहीँ नै उनीहरूले इसहाक र तिनकी पत्‍नी रिबेकालाई पनि गाड़ेका थिए। त्‍यहीँ नै मैले लेआलाई गाडें।
32 त्‍यो खेत र त्‍यहाँ भएको ओड़ार हित्तीहरूको हातबाट किनेको हो।”
33 छोराहरूलाई यो आज्ञा दिइसकेपछि याकूबले आफ्‍ना खुट्टा ओछ्यानमा पसारेर आफ्‍नो प्राण त्‍यागे, र आफ्‍ना पिता-पुर्खाहरूसँग मिल्‍न गए।
Genesis 48 Choose Book & Chapter Genesis 50